NDI OTU ROTARY KWANYERE UGWUANYỊ UGWU. – hoo!haa!!
Ndi otu ọga n’ihu na-adị mma n’ụwa niile bụ Rotary International ngalaba nke 9142, Naijiria nọrọ n’isi nso a jaa aka na-achị steeti Enugu bụ Ifeanyị Ugwuanyị ike ma nye ya onyinye nke ùgwù maka ọchịchị ya bụ ịgba.
Anọrọ n’emume ịkụ ngaji n’eze ekpokọbara maka onye ọchịchị a kwanyere ya ùgwù a mgbe ndi otu a mechara emume ejiri tinye onye isi ha ọhụrụ bụ Dọkinta Dan Ajawara n’ọrụ n’Enugwu.
Mgbe ọ na-enye ya onyinye ùgwù a, onye isi ọhụrụ a bụ Ajawara kọwara Ugwuanyị dika onye dị umeala, onye anaghị eme ka a sị, nakwa onye na-eletịpụ anya tupu o mee. Ajawara gara n’ihu kwue na Ugwuanyị na-eburu ụzọ mee ihe ọ chọrọ ka e mee. Ọ sị n’ọbụ site n’ụdị ịgba mbọ ndi a ka ha ji akwanyere ya ugwu dị otu a.
Ajawara kwuru hoohaa na ọ na-enye ha bụ ndi otu Rotary nsogbu ịkwanyere onye ọchịchị steeti ọbụla ụdị ugwu a mgbe ọ ka nọ n’ọrụ n’ihi na onweghị ihe jikọrọ ha na ndọrọ-ndọrọ ọchịchị. O kwuru na Ugwuanyị dịka otu onye ndi otu Rotary na-eme ihe na usoro ebum n’obi ha, site na ime ihe na-enyere ndi ọ na-achị aka. Ọ sịrị na ndi mmadụ na-ekwu na Ugwuanyị ga-achịrị ha gaba n’ihu.
Ajawara sịrị na ndi Rotary anọghị na ndọrọ-ndọrọ ọchịchị kama na ihe ha na-ele anya eme ihe bụ ka ndi ana-achị achị si egosi ma kwuputa ka ihe si aga.
Ọ sị na ọbụ nke a kpatara ha ji akwanyere Ifeanyị Ugwuanyị ugwu taa iji gosi na ọ bụ onye ọchịchị aka ọrụ ya pụrụ iche. Ọ sịkwara na ha nwere olile anya na nkwanye ugwu a ga-enyere Ugwuanyị aka ime ihe ndi ọzọ karịrị nke o megoro eme.
N’ọsịsa okwu ya, onye ọchịchị bụ Ugwuanyị kelere ndi otu a ka ha siri kwanyere ya ụdị ugwu nke kacha elu ndi otu a.
O toro onye isi oche mmemme ahụ bụ onye isi ala Naijiria n’oge gboo bụ Ọchị-agha Abdulsalami Abubakar nke Ichie Emeka Eze nọchitere anya ya na mmemme ahụ, tinyekwara ndi ọzọ welitere isi bịara yabụ mmemme. O kelekwara Dọkinta Ajawara maka mkpọlite akpọlitere ya dịka onye ọchịchị ngalaba nke abụọ otu ahụ.
Ugwuanyị sịrị na dịka onye otu Rotary nakwa onye jibu okwa onye isi ngalaba nke Emene, na ya mara ihe ndi bụ ebum n’obi otu a, marakwa ụdị obi ọma na-eso onye ọchịchị ukwu nke ndi otu ahụ a kpọrọ ‘District Governor’. O gosiputara nkwenye ya na Dọkịnta Ajawara ga-eme ọfọma n’ihi na o nwere ihe niile ga eme ka o bulie ọdị mma otu a elu n’ụzọ kwesịrị ekwesi.
Ugwuanyị kwuru na ya ga-etinye isi sekpụ ntị ebum n’obi ndi otu Rotary, nke bụ “tụlee ụzọ ihe anọ tupu imebe ihe” n’ọrụ ma were ha mee ihe, dịka odibo ndi ya na-achị bụ ndi steeti Enugwu.
Ugwuanyị kelere ndi otu Rotary maka ịdọnyere steeti Enugwu ukwu n’ọrụ, ọ kachakwa ka o si gbasata iweta ihe na-enyere ndụ aka nakwa ịhụ maka enyem aka ndi ụwa na-atụ n’ọnụ.
N’ikpe azụ, o kelere ndi otu Rotary maka ịnọ n’Enugwu mee mmemme a. Okwere nkwa na ha ga agba mbọ ịkwalite ebum n’obi ndi otu Rotary mgbe dum.
Previous Post: MBAKA AGWALA BUHARI KA Ọ GAA ROM GA RỊỌ MGBAGHARA
Next Post: AMAALA NDI GBURU ỤKỌCHUKWU NA BENUE IKPE ỌNWỤ